We She Me: “အထွေထွေ” ဘလော့ဂ်များ
pm - 4/20/09, 4:30 PM
ဖတ်ပြီး အများကြီး စဉ်းစားဖြစ်သွားတယ်...။
The Bagan Land - 4/20/09, 7:00 PM
ကျွန်တော့်ရဲ့ Site လေးပါခင်ဗျာ။ စံနစ်မကျသေးပါဘူး။ လာရောက်လည်ပတ်ပြီးအကြံပြုပေးပါအုံးခင်ဗျ။
Anonymous - 4/20/09, 7:11 PM
I think 'lifestyle' category is still too broad. Perhaps 'Family and Friends' for your blog? It's not right either, since you also write about IT. Categorising is quite tricky, and may be we need to formaworking committee to determine which blog falls under what category.
နေညိုရင့် - 4/20/09, 9:14 PM
အကယ်ဒမီဘုတ်အဖွဲ့ ကို အကြံပြုပေးချင်တာကတော့ "အထွေထွေ" ဆိုတဲ့ Category ကို ထပ်မံ classify လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲ ဆိုတော့ ကိုအန်ဒီရေးသွားသလိုပါပဲ blog အများစုက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ ကိုယ်နဲ့ ထိတွေ့ ရာ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ခံစားမှု စတာတွေ ရေးကြသလို၊ ရသပိုင်းတွေ ၊ ဆောင်းပါးတွေလဲ ပါဝင်တာကို တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ အကယ်ဒမီဘုတ် အဖွဲ့ က blog တခုဟာ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ၊ ဟင်းချက်နည်း၊ IT ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ခရီးသွားဆိုင်ရာ စတဲ့ သီးသန့် လိုင်း မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ပထမအဆင့်အနေနဲ့အထွေထွေဆိုတဲ့ category အောက်ကို ထည့်ပါ.. ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့အဲဒီ blog မှာပါဝင်တဲ့ post တွေ label တွေအရ ထပ်မံပြီး ခွဲခြမ်း ပိုင်းဖြတ်ဖို့ ပါ။ ပြီးတော့မှ Voting လုပ်တာကို launch လုပ်ပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဗျာ။
TZA - 4/20/09, 11:00 PM
အကယ်ဒမီတုန်းက တခုခုလိုနေတယ်ဆိုတာ တွေးမိပေမယ့် ဘာလိုနေမှန်း အသေအချာ သွားမတွေးကြည့်ဘူး၊ ကိုအန်ဒီကတော့ အချိန်ပေးပြီး တွေး+ရေး တယ်၊ စေတနာတွေ တွေ့ရပါတယ်။ ကျနော့်အထင် အဲသလို မဲပေးတာ ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါ၊ ဒါမှ အားလုံး ပိုကောင်းအောင် ကြိုးစားကြမှာ၊ ဒါပေမဲ့ မဲကို တဆင့်တည်း ပေးလိုက်တာမျိုးထက် အဆင့်ဆင့် ဆန်ခါတင်သွားရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ရွေးစရာ နည်းသွားလေလေ ကိုယ့်အကြိုက်ကို ပိုသိလေလေပဲ။
Anonymous - 4/21/09, 1:24 AM
I do not think anything wrong with the blogs under general category.The way I perceive is, these blogers who are quite well rounded ,can write anything. I am justablog reader and enjoy all sorts of blogs. The most importent thing for the blogger is ,whatever you write must interest the readers. Not anly the substance but also the style of writing.....
I always enjoy reading your posts. Keep going!
Moe Cho Thinn - 4/21/09, 2:59 AM
ကို Andy တယောက်တော့ ရင်ထဲမှာ ကျလိ ကျလိ ဖြစ်နေတာလေးတွေ ဒီပို့စ်နဲ့ ကုတ်လိုက်ပုံပဲ။
မှန်ပါတယ်။ ရေးသမျှတော့ ခေါင်းစဉ်တခုတည်း အောက်မှာ နံမည်တပ်ဖို့ ခက်လှတယ်။ သူတို့လဲ ပထမဆုံးအကြိမ်မို့ အသေအချာ စဉ်းစားဖို့ အချိန်မရတာ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခုလို အကြံပြုကြရင် နောင် ပိုစနစ်ကျလာမှာပေါ့။ နောက်ပြီး ရေးသမျှလဲ ကောင်းဖို့၊ ဖတ်သူရော ရေးသူပါ အကြိုက်တွေ့ဖို့ ခက်တယ်လို့ အမ ထင်တယ်။ တခါတလေ ကိုယ်က မကြိုက်၊ စာဖတ်သူက ကြိုက်။ တခါတလေ ကိုယ်က သိပ်လက်တွေ့နေ၊ စာဖတ်သူက မကြိုက်ပေ :) ။
အမကတော့ ကိုယ်နှစ်သက်ရာ ဖတ်နေရရင် ကျေနပ်နေတာပါပဲ။ ကိုယ်က ရသ စာပေ ပိုကြိုက်တာမို့ ရသလေးတွေ ပိုနှစ်သက်တယ်။ တခုပဲ။ အကျိုးလဲ ရှိ၊ စိတ်လဲ ပျော်၊ အပန်းလဲ ပြေချင်လို့ stress တွေကြားက လာလာဖတ်ရတာမို့ စာကြည်ကြည်လေးတွေ ပိုဖတ်ချင်မိတာ အမှန်ပဲ။
IT ကျတော့ ခပ်တုံးတုံးမို့ စူးစိုက်ပြီး ဖတ်ရတယ်။ တို့လို လူချည်းဆို ကမ္ဘာကြီး တိုးတက်မှာကို မဟုတ်ဘူးလို့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ကောက်ချက်ချရတော့တာပဲ။ :))
မီယာ - 4/21/09, 7:29 AM
မမလှထုံ အဖွဲ့ထဲ ပါမယ်နော် :)
အလုပ်က ပြန်ရောက်တာနဲ့ ဘလော့ဂ်တွေလည်ပြီး အပန်းဖြေတာပဲ... သူငယ်ချင်းတွေ အကြောင်းဖတ်ရသလို တခါတလေ ခံစားရသလို စိတ်ညစ်တာတွေ ပြေသွားအောင် ရယ်ရတဲ့ အခါ လည်းရှိတယ်။ general ဖြစ်ဖြစ် တခြား category ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ ဘလော့ဂ်တွေဆို မှန်မှန် သွားဖတ်တာပါပဲ။ we she me က တခုပေါ့။
Nu Thwe - 4/21/09, 9:20 AM
ဘလော့ဂ်တွေကို ကဏ္ဍ (category) သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် ကောင်းတာ ရှိသလို၊ မကောင်းတာလည်း ရှိနိုင်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ကောင်းတာက ကဏ္ဍ သတ်မှတ် ဆုပေးတဲ့အတွက် အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းမှု ကောင်းလာနိုင်တဲ့ အလားအလာပေါ့။ ရေးတဲ့သူတွေလည်း ကိုယ် သန်ရာသန်ရာကို ပိုအားစိုက်ထုတ် ရေးသားလာကြမယ်။ “ဗြောက်သောက်” ရေးတာ နည်းလာမယ်။
မကောင်းတာက ကဏ္ဍ သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက် ဘောင်ခတ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဘလော့ဂါ အများစုဟာ professional စာရေးဆရာတွေ မဟုတ်ကြဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ရှိတာလေးကို ပြောပြချင်၊ ဝေမျှချင်တဲ့ သူ များတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ရေးသား ပြောဆိုခွင့် မရခဲ့တဲ့ နေရာက လာတဲ့ (သို့မဟုတ် ရှိနေသေးတဲ့)၊ ရောက်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်သစ်မှာ လုံးဝ တစ်သားတည်း ပျော်ဝင်သွားဖို့ အခက်အခဲ ရှိနေ(သေး)တဲ့ သူတွေ များတာကိုး။ (ကိုယ် အပါအ၀င်ပါ)
ဒီလို အခြေခံ အကြောင်းတရားတွေကြောင့် ဘလော့ဂ် ရေးနေကြသူတွေရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ရေးနိုင်ခွင့်နဲ့ ဖန်တီးမှုအတတ် (creativity) အပေါ် categorisation က ကန့်သတ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားမလား။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒါကို လိုက်နာရမယ်လို့ ဘယ်သူကမှ အတင်း တိုက်တွန်း ခြိမ်းခြောက်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် award ဆိုတာကaformal way of appreciation မို့ ဒါကို စိတ်ဝင်စား မျှော်လင့်မိတဲ့သူက အများစု ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ categorisation ဘယ်လို လုပ်လဲဆိုတာ အရေးကြီးလာပြီ။ ရေးချင်တာလေးတွေ ကြားညှပ်ရေးမိတာနဲ့ပဲ “ဗြောက်သောက်”လို့ သတ်မှတ်ခံရသင့်သလား။ “ဗြောက်သောက်” ဖြစ်တော့ရော ဘာဖြစ်လို့လဲ။
ကိုယ့်အမြင်ကတော့ ဘလော့ဂ်တစ်ခုဟာ သူ့ရဲ့ Prevailing theme (ပေါ်လွင်ထင်ရှားသော အဓိက အကြောင်း) ပေါ် မူတည်ပြီးပဲ categorise လုပ်ခံရသင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဘယ်အမျိုးအစားကို ဘယ်လောက် ရာခိုင်နှုန်း ရေးမိရင် prevailing theme ရယ်လို့ သတ်မှတ်မယ် ဆိုတာကို စဉ်းစား ဆွေးနွေး သဘောတူဖို့ လိုလာမယ်။ ဓမ္မဓိဌာန် ကျမှု (objectivity) အတွက်ပါ။
ဘလော့ဂ်တစ်ခုကို ရေးရ ထိန်းသိမ်းရတာဟာ ခက်တယ်ဆိုရင် ဘလော့ဂ်တွေ အများကြီးကို categorise လုပ်ရတာ ပိုခက်ခဲပါတယ်။ အတွေ့အကြုံ၊ ဗဟုသုတနဲ့ ဓမ္မဓိဌာန် ကျမှု လိုတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ သိက္ခာရှိရှိ ပီပီပြင်ပြင် လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့။
ပုဂ္ဂလိက (အတွေ့အကြုံ) တို့ပါပဲ။ ဒါလောက်ဆို တော်လောက်ပြီ ထင်တယ်။ သိပ်များတော့လည်း မကောင်းဘူး။ တန်ဖိုး လျော့တယ်။
ကိုယ့်ဘလော့ဂ်ကို ကိုယ် ပြန်ဆန်းစစ်ဦးမှလို့ စဉ်းစားနေတုံး ကိုအင်ဒီ့မေးခွန်းကြောင့် ပြန်ကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ဟိုရောဒီရော ရေးချင်၊ ရေးနေတဲ့အတွက် (အနည်းဆုံး ခုလောလောဆယ်မှာတော့) “အထွေထွေ” သို့မဟုတ် “ဗြောက်သောက်” ပဲ သတ်မှတ်ခံရဖို့ များတယ်။ ကိစ္စ မရှိပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ပျော်ပျော်ကြီး ဖက်တွယ်ထားခွင့် ရလို့ ကျေနပ်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ် ရေးတဲ့ စာကိုတော့ ကိုယ် တာဝန်ယူပါတယ်။
ကဲ လေတော်တော် ရှည်သွားပြီ။ ကိုအင်ဒီ အစဖော်ပေးလို့ စဉ်းစားဆွေးနွေးဖြစ်သွားတာ။ ကျေးဇူးပါပဲ။
Anonymous - 4/21/09, 7:31 PM
arr arr yar yar blog
တောင်ပေါ်သား - 4/22/09, 4:49 PM
အကိုရေ သေချာဖတ်သွားပါတယ်။ စီစဉ်သူတွေလဲ သိတဲ့အတိုင်း မြန်မာဘလော့တွေက အရမ်းများတော့ ခွဲရခက်သွားတယ်လို့ ကျနော်ယူဆမိပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့လို ပရိတ်သတ်တွေကတော့ လိုက်ဖတ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်ကြီး ခွဲခြားနေတာထက် အရေးအသား၊ တင်ဆက်ပုံလေးတွေကို ပိုမိုနှစ်သက်မလားလို့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေကလေ... အကိုပြောခဲ့သလို ကျနော်တို့ ဘလော့တွေကို ခေါင်းစဉ်တခုထဲအောက်ကို ထည့်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်တာပဲ။ လူဆိုတာ သူအားသန်ရာရေးနေမှာပါလေ ရသရေးတဲ့ဘလော့ကြီးမှာလဲ တခါတလေ နိုင်ငံရေးဘာညာ စသည်ဖြင့် ပါလာမှာပါပဲ။
ဆောင်း - 4/23/09, 7:40 AM
rocket science, space science စသဖြင့် သိချင်ရင် myanmarastronomy.blogspot.com ကိုလာလည်န်ာအဟင်း...း-)
ဆောင်း - 4/23/09, 7:50 AM
ဆောင်း - 4/23/09, 8:11 AM
ကျမတော့ ကိုယ်ရေးချင်တာ ချရေးနိုင်တဲ့ ငွေမကုန် အလကားရတဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာမှာ သူများတကာက ဘောင်ခတ် သတ်မှတ်တာ ကို အလေးမထားချင်ဘူး။ ကိုယ်ရေးချင်တာ၊ ရင်ထဲကခံစားချက်တွေ ချရေး လိုက်ရဖို့ ဘဲ အလေးထားတယ်။ ကျေနပ်တယ်။ အိမ်တအိမ် ဆောက်ထားသလိုပါဘဲ။ ကိုယ့်အိမ်လေးထဲမှာ ပျော်ရွှင်တာရော၊ ၀မ်းနည်းတာရော၊ နည်းပညာပေးမှု့ တွေရော၊ ချက်ပြုတ် စားသောက်တာရော၊ ကိုယ့်အတွေ့ အကြုံရော၊ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းအကြောင်းရော၊ လျှောက်လည်တဲ့ အကြောင်းရော အကုန်ပါနေမှာဘဲ။ အခန်းကန်တ ပိုင်းခြားခံရဖို့ဘာကိုရေးသင့်တယ်လို့ဦးတည်ချက်ချလိုက်ရင် ဘလော့ပိုင်ရှင်ရဲ့လွတ်လပ်စွာ စာရေးပိုင်ခွင့် မရှိတော့ဘဲ အကျဉ်းချခံထားရသလို Brainwash လုပ်ထားခံရသလို ဖြစ်သွားမယ်လို့ယူဆမိတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ရေးချင်တာ ရေးထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင် ကိုယ်စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာအိမ်ကလေး (ဘလော့စာမျက်နာ) လေးဟာ ကိုယ့်အတွက် စိတ်ကြေနပ်မှု့စိတ်အကျဉ်းကြပ်ကင်းကင်းနဲ့ရင်ထဲက အကြောင်းတွေ ဖွင့်ချနိုင်ဖို့့ဘဲ လိုအပ်တယ် လို မြင်ပါတယ်။
pandora - 4/24/09, 2:40 AM
တွေးစရာပါ။ မနုသွဲ့နဲ့ ဆောင်းပြောတာလည်း စဉ်းစားစရာပဲ။
ကန့်သန့်လွန်းရင် ဘောင်ခတ်သလိုဖြစ်နိုင်သလို သတ်သတ်မှတ်မှတ်မရှိ ရောထွေးလွန်းတာကလည်း ရည်ရွယ်ချက်ရဲ့ ပြောင်းပြန် အကျိုးသက်ရောက်နိုင်တယ်။
pandora - 4/24/09, 2:41 AM
Anonymous - 4/24/09, 6:40 PM
မှန်ပါတယ်ရှင် ဥပမာပေ့ါ ကျမပါဝင်ရေးနေတဲ့ myanmarastronomy.blogspot.com ဆိုတာက သီးသန့်အာကာသ သိပံအကြောင်းရေးတာပါ။ ကျမရဲ့ကိုယ်ပိုင် ဘလော့ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေ ရင်ဖွင့်တဲ့ နေရာ စိတ်အကျဉ်းကြပ်တွေ ရင်ဖွင့်တဲ့ နေရာလေ. အဲဒီနေရာက နေ ဘလော့မောင်နှမ တွေ ရှာတဲ့ နေရာ လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ဆွေးနွေးခွင့်ရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
လင်းကြယ်ဖြူ - 4/28/09, 9:13 AM
Anonymous - 4/29/09, 12:05 PM
မဆုမွန် - 4/30/09, 8:58 PM
We She Me ဘလော့ဟာ ကျွန်မ အမြဲလာအားပေးတဲ့ ဘလော့ပါ
အခုတင်ထားတဲ့ ပို့စ်ကိုလည်း သေသေချာချာ ဖတ်သွားပါတယ်။။ ဒါပေမယ်
အနည်းငယ်သော နိုင်ငံရေး ဘလော်ဂါများကလွဲရင် ဘလော်ဂါ တော်တော်များများက ကျန်တဲ့ မြန်မာ ဘလော်ဂါတွေလို အုတ်ရောရော ကျောက်ရောရော မလုပ်ကြပါဘူး။
ဆိုတဲ့ စာပိုဒ်မှာ ကျန်တဲ့ မြန်မာဘလော့ခ်ဂါတွေလို အုတ်ရောရော ကျောက်ရောရော မလုပ်ကြဘူးဆိုတာလေး သိပ်မရှင်းလို့ ပါ.. ကျွန်မသိတဲ့ အုတ်ရောရော ကျောက်ရောရောဆိုတဲ့ စကားက မြန်မာပြည်မှာ အရပ်ထဲမှာ လူတွေကို ပြောတာလေ ဒီကောင် အုတ်ရောရော ကျောက်ရောရောနဲ့ပါလာတာပါ ဒီလူတွေက အုတ်ရောရော ကျောက်ရောရောတွေပါ ဆိုတာ က အဆိုးဘက်ကို ပြတဲ့ စာလုံးလို့ မြင်မိလို့ပါ
Andy Myint - 4/30/09, 11:07 PM
အထွေအထူး မဟုတ်ပါဘူး မဆုမွန်။ ကျောက်တွေလို နိုင်ငံရေး ဘလော်ဂါ(တချို့ သို့မဟုတ်) တော်တော်များများက သာမန် အရပ်သား ဘလော်ဂါတွေနဲ့ ရောရော နှောနှော မနေတတ်ကြဘူးလို့ ပြောတာပါ။ အတွေးအခေါ် အတွေ့အကြုံ အသက်အရွယ် မတူလို့ ဖြစ်နိုင်သလို မရောချင်လို့လည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ နိုင်ငံရေး သမားတွေ ကျွန်တော်တို့လို အရပ်သားတွေနဲ့ ရောရော နှောနှော နေသင့်လား မနေသင့်လား ဆိုတာကိုတော့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ အသိသင့်ဆုံးပါ။ အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
မဆုမွန် - 5/1/09, 9:51 AM
ဟုတ်ကဲ့ ဖြေပေးတာ ကျေးဇူးပါရှင် ကိုအန်ဒီတို့မိသားစု စိတ်ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ
khin oo may - 5/1/09, 4:39 PM
Anonymous - 3/2/13, 5:31 PM
အကွပ်မဲ့ကြမ်း ပရမ်းပတာ - ဆိုတော့ စည်းကမ်းရှိသင့်သလောက်တော့
ရှိသင့်တယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ စည်းတွေ ဘောင်တွေနဲ့ ကန့်သတ် ချုပ် ချယ်ထားတားမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်။ ဒီတော့ အစွန်း လွတ် ကန့်သတ်ချက်တော့ ရှိသင့်တယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆမိပါကြောင်း။